RASMI: Kylian Mbappe Oo Go'aan Rasmi Ah Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Paris Saint-Germain. - Gool24.Net
RASMI: Kylian Mbappe Oo Go’aan Rasmi Ah Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Paris Saint-Germain.
Da’yarka xulka qaranka France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa meel saaray mustaqbalkiisa kadib markii waqti dheer la hadal yahay in uu xagaagan ku biiri doono kooxda Zinedine Zidane ee Real Madrid.
Kooxo badan oo Yurub ka dhisan ayaa si dhaw isha ugu soo hayay xaalada Kylian Mbappe ee kooxdiisa PSG kadib markii uu shaki wayni soo galay mustaqbalkiisa laakiin waxa uu hadda si rasmi ah u shaaciyay go’aankiisa ay kooxihii doonayay sugayeen.
Kylian Mbappe ayaa ugu danbayn meesha ka saaray mugdigii hadheeyay mustaqbalkiisa PSG wuxuuna xaqiijiyay in aanu meelna u socon oo ay hubaal tahay in xili ciyaareedka cusub ee soo socda uu sii joogi doono PSG.
Waxa kale oo uu Kylian Mbappe maamulka kooxdiisa PSG kaga farxiyay balan uu ugu qaaday in uu u dagaalami doono sidii uu kooxda uga caawin lahaa koobabka ugu badan ee ugu suurtogalsan in ay ku guulaysan doonaan.
Hadalkan uu Kylian Mbappe sida rasmiga ah ugu xaqiijiyay mustaqbalkiisa PSG ayaa dhirbaaxo wayn ku noqonaya Florentino Perez iyo macalinka kooxdiisa Real Madrid ee Zinedine Zidane oo doonayay in Mbappe ay la soo saxiixdaan.
Heshiiska uu hadda Kylian Mbappe kula jiro kooxdiisa PSG ayaa dhacaya sanadka 2022 laakiin maamulka Paris ayaa doonaya in ay xidigan ku qanciyaan in uu saxiixo heshiis cusub oo si buuxda ugu sii quus goyn kara dhamaan kooxaha waa wayn ee xidigan hunguraynaya.
Kylian Mbappe oo waraysi siiyay BeIN Sports qaybteeda France ayaa yidhi: “Anigu waxaan joogaa halkan Paris, waxaanan doonayaa in aan qayb ka sii ahaado mashruuca halkan. Waxaan doonayaa in aan xili ciyaareedka soo socda sii joogo PSG, waxaanan isku dayi doonaa in aan koobabka ugu badan ee ugu suurtogalsan ku guulaysto”.
“Waxaan ku jiraa sanadkaygii afraad ee mashruucan, waa sanad muhiim ah maadaama oo ay tahay sanad guuradii 50 aad ee kooxda, waa sanad muhiim ah marka lagu eego indhaha kooxda, taageerayasha, waxaanan doonayaa in aan isku dayo in aan ku guulaysto koobabka oo dhan oo aan nooca naftayda ugu fiican bixiyo”.
Kylian Mbappe oo PSG sanadkii 2017 kii ugu soo biiray 180 milyan yuro ayaa kooxdiisa PSG u soo ciyaaray 120 kulan wuxuuna ku soo dhaliyay 90 gool laakiin waxa uu kaga sii farxiyay in uu kooxda ku sii nagaan doono.
Laakiin haddii ay maamulka PSG isku hubsadeen adeega Kylian Mbappe, waxa uu wali shaki wayni ku jiraa haddii uu Neymar Jr xili ciyaareed kale sii joogi doono Paris kaas oo isna lala xidhiidhinayo Barcelona balse Real Madrid ayaan xagaagan heli doonin Mbappe oo go’aan rasmi ah u qaatay in uu Paris sii joogo.